Waxaan maanta la casriyeeyay… laakiin plugin ayaa hadda joojiyay tarjumida.
Sidoo kale sidee shaqada traslating URL? sidii aan siinin wax arki shaqeynaya in midkood.
turjumaad URL wuxuu qaadanayaa qaybaha url wixii translatable oo isku dayaysa in ay iyaga iyo dib u turjumi, soo waa marka bogga la abuuray, oo dhan URLs lagu bedelay in turjumaadaha ay, iyo dib u, waa marka user codsado url sida a, plugin ku sheegayaa WordPress oo page user dhab ahaan loo gudbiyaa. aad u baahan tahay si ay awood taageero u yeelay in goobaha.
Waan ku faraxsanaan lahaa si loo hubiyo sababta plugin ku joojiyay tarjumida, laakiin waxaan u baahan tahay URL qaar ka mid ah in ay eegaan…
Rob Davies sheegay
Translation of URL ee!!- Ayaan raadinaayey ku wareegsan, waayo, plugin ah turjumaad in uu ahaa dhab alaabada iyo maanta (maalinta aad sii daayo version turjumaad url ah) Waxaan soo gaarto aad plugin – aad baad u mahadsantahay!
Ma lahaa fiiriya at iyo u shaqeeyo weyn – fog ka khayr badan wax ka soo halkaas.
Waxyaalaha run ahaantii waxaan jeclaan ku saabsan tahay:
– turjumaad URL
– bogga tafatirka
– dhawraa goobaha navigation caadada la mid ah
– Xitaa tarjumayaa All in mid ka mid Meta Seo iyo sharaxaada!
Fantastic – Waad ku mahadsan tahay…..
Thanks for bogaadin ku… Fikradaha horumar la qadariyo lahaa
Waad ku mahadsan tahay this plugin weyn. Maanta waxaan u casriyeeyay si version cusub. Waxaa la shaqeeyaa sidii la filayay. Laakiin waxaa jira qalad yar oo qaar ka mid ah waxaan qabaa.
Afka default isticmaalo on my website waa Bahasa Indonesia. Ka dib markii lagu casriyeeyo, waxa uu noqday English on frontend halka ay tahay in page admin ma isbeddelay.
Waxaan isku dayaan in English ka dhigi doonaa sida luqadda default aan admin page oo ay u shaqayso. Markaas, wax laga beddelo dib u Bahasa Indonesia, laakiin Baro degmadaada weli muujiyaan Ingiriisi by default.
Waxaan samayn meel aan qaladka saxda ah. Aniga ayaa wali waxa ay ula socdaan halka qoraalkan. Malaha waxaa ka khasnado browser uu yimaado, laakiin ma aan sidaas u maleynayo.
Waad ku mahadsan tahay wax caawimaad ah..
Waxaan arkaa your site in Bahasa, waxaa laga yaabaa in aad awood u feature ogaanshaha luqadda kaas oo kuu soo diro bogga Ingiriisi ah, waxaa url ka beddelo aad cinwaanka bar?
Waxaan hadda wax ku arkaa in ay u badan tahay in dhibaato la luqadda default, fadlan isku day jiidayeen Basha ee ugu sareysa, oo waa in wax laga beddelo. haddii aan shaqayn doona, Waxaan si toos ah waxaad la xiriiri doonaa
Marka, Waxaan doonayaa in aan ku mahadsantahay inaad caawimo laakiin maanta waa caawimaad ma mar dambe sababtoo ah web ayaa la ganaaxay ogeysiis la'aan. Maxay kula tahay?
Not, Waxaan ula jeedaa ma waxa u sabab ah aad plugin, laakiin waxaan kaliya qabaa sababta admin ciidankii server ganaax aan xisaab inta aan dayactirka aan website sababtoo ah waxaan ognahay inay jiraan dhibaato qaar ka mid ah, iyo in ay ogeysiis la'aan aad u. Ma ahan cadaalad ah, ma aha waxa ay?
Waad ku mahadsan tahay this reply degdeg ah. Waa in hadda Bahasa markii aan beddelo luqadda default in English. Haddii aan si Bahasa dhigay luqadda default, waxa uu ku soo bandhigeen Ingiriisi sida default.
shaqada Awesome la tarjumaadda of URLs posts, in”s aad u anfacaya oo si weyn buu la SEO caawin doonaa. Laakiin waxa ku saabsan pages? Waxaan aad u hesho qaladka 'page aan helay’ markii aan guji link page ah oo uu soo tarjumay, URLs post waa ganaax sida waxaan is-idhi, waxay la helay oo aan qalad kasta. Waa maxay sababta this dhaca?
Mid ka mid ah wax kale, markii aan u hesho 'page aan helay’ qalad, bogga celiyay gudasho la'aanta Tarjamada Afka. Tani dhiba doonaa visitors in mar kale reselect afkooda, dhalato a noqon lahayd weyn. Thanks
Sidaas daraaddeed eraygii ma on baadi this ka dibna?
Waxaan u maleeyay in aan u go'an on 0.5.4 (this dhacay bogagga lahaa tusaale ahaan hi (waayo, Hindi) in Xilalkooda url, oo waxaa helay turjumay) haddii cudurkii weli dhacaya, kaliya jawaab url ah na si ay u tijaabiso.
xumahay ma soo jawaaba si degdeg ah, iyo godspeed
Quburada qalad: qalad syntax, dhamaadka $ filayn in /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php on line 2131
update im plugin cusub, oo la jaan cusub laakiin la muuqday. ii sheeg sida loo xaliyo.
Waa maxay sababta ay yihiin baxay si admin ka widgets ee? Maxaad anigu ma on turjumaad ah ee asalka ah ee version cusub si ay u beddeli kartaa?
Waxaan isku dayay ah 0.3.4 version oo ay halkaas ceel shaqeeyay widgets ee admin laakiin aan halkaas ma turjumi karo sidoo kale.
Waxaan rajeynayaa for version xiga horey u qaldaan markaas waa inaad u hesho si xor ah kuwaas oo.
Anyway siyaada yar aad u wanaagsan!
Waxaa, in aynu shaqo wax walba waa inaan in ay isticmaalaan 0.5.2 version dhinaca, laakiin qaladkiisii ​​widgets qori sida sawirka waxa uu muujinayaa.
Ma fahmin aad labada su'aalood ee hore, sidaas awgeed fadlan ku garano
Waxaan sidoo kale ma heli qaladka aad aragto, Ma eegi uusan u noqon in aan code, inkasta oo waxaa laga yaabaa in, tani tag markii Transposh waa naafo ah?
My Ingiriisiga waa qayb yar oo miskiin baan idin weyddiinayaa for this waan ka xumahay.
Haddii Transposh la demiyo ka dibna si fiican u shuqullada walba.
su'aasha My koowaad waa: Waa maxay sababta aan u shaqayn widgets ee dusha admin haddii Transposh waxaa u suurta?
My labaad waa: Waa maxay sababta aan ma turjumi karaa brand version cusub ee 0.5.3 haddii i isticmaali edit turjumaad?
waa in aan isticmaalo 0.5.2 version daro badani i turjumi kara arrintan.
Laakiin waa out of Si weli ii at default turjumaad af awood iyo kuwa weli u ogyahay waxa aan la workin.
qalad this Ma dhici ila kaliya?
Waxaan rajaynayaa in aan xaq u heshay markan
1. Waxaan ma uu awood on interface admin ah, sababtoo ah waxa ay noqon doontaa shaqo aad u badan lacagta aad u yar, Waxaan jecel maal markii in kale, (taas oo aanu rajaynaynaa in) waa muuqaalada dheeraad ah oo muhiim ah
2. Nope, waxaan u maleynayaa in cayayaanka ah in ay jiraan Gurguurte, 0.5.4 waa uun soo baxay – fadlan ku siin isku day ah
waxaan isku dayay 0.5.4 version laakiin nasiib darro waxba ma uu is beddelay.
Waxaan isku dayay ah 0.5.4 versions laakiin nasiib darro waxba ma uu bedelay.
waad ku mahadsan tahay this plugin weyn oo ka xumahay aan Ingiriisi xun.
Waxaan dhibaato ka qabto Transposh: marka waxaan gelin post a, ma turjumi luqadood.
Tani waa xidhiidhiyaha:
Waad ku mahadsan tahay wax caawimaad ah.
Waxaan arkaa in aad goobta ayaa la shaqeeya, gujinaya calamada ee isbedel ku qoran luqado kala duwan, iyo dhameysan tarjumaadda,
Waxaad u baahan tahay in ay si gaar ah oo ku saabsan waxa aan shaqayn
waydiiyaa mahad jawaabta …
Markii aan weydiiso amarka “Translate All” Anigu taas ma dhameysan karaan.
Amarkani waxa uu yahay mid gaabis ah, si looga fogaado abuuraya gaadiidka aad u badan si server Google. Waxa kale oo laga yaabaa in aad hor istaagay, isku day in aad ugu isticmaalin, ka ip a kala duwan, ama si fudud u sugaan.
Waxaan isku dayay in lagu daro link kale aan shaqayn:
Waxaan ha amarka “Translate All” habeenkii oo dhan aan la dhammeeyey.
Waxa ay u muuqataa in blocks fur-in ka.
Ka hor inta ku fur-in si deg-deg ahaa.
Mar labaad, this link shuqullada, Waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan in ay helaan ka computer / browser kala duwan. The turjumo oo dhan sugaysaa 5 seconds dhexeeya turjumaad weedh kasta, haddii aad rabto in ay dhaqso u tagaan, aad edit karaa code ka
Oo haddii aad aaminsan tahay in goobta ay tahay mid gaabis ah, this u badan tahay in uu noqon doono mid run ah, laakiin ku rakibidda APC caawisaa badan
Waydiiyaa Thanks gargaar ah …
Waa maxay APC?
Its xawaaraha ah php, iyo Transposh dhigaysa isticmaalo waxaa ka mid ah si looga fogaado helaan database
Waad ku mahadsan tahay caawimo.
Waxaan sii wadi in ay dhibaato Transposh.
Isagu ma uu samayn karo turjumidda.
Thanks for caawimo ah.
ama link this:
Sidoo kale maanta waa wax la mid ah:
Waxaan ku daray post cusub guddi admin Conciliation ah 2.9.2
riixi “Refresh” in ay ku kaydiso Post, Si kastaba ha ahaatee, tarjumaadda ah tilmaamayaasha ee sanduuqyada Transposh waxaa xiran hana dhaqaaqin.
Marka aad hubiso turjumaad ka dhanka user, text aan la turjumay laakiin weli afka asalka ah.
Waan ku imtixaannay browser kale, laakiin waxa ay u dhaqmo si la mid ah.
mar Waad ku mahadsan tahay caawimada.
Haddaba waxaa shuqulladaada oo dhan ….
Thanks mar kale gargaar ka qiimo badan.
ka xumahay, laakiin mar dambe ayaan dhibaato block ah.
Muujiyeyaasha in “sanduuqa Transposh” Waxay yihiin qufulan iyo ma guurto.
Waxaan riixi badhanka “turjumi All” oo waxaa u suurtagashay in ay sameeyaan tarjumaadda (isticmaalaa habeenkii oo dhan).
ka hor “turjumo oo dhan” weedho waxaa lagu tarjumay 197624, ka dib 207311.
Haddaba mar dambe u qabata tarjumaadda luqadaha of post cusub oo laga xannibo.
Waxaan laga yaabaa qabaa yar cayayaanka ah.
Laakiin waxaan rajaynayaa in aad aragto isaga shaqeeyaan sidii hore ….
mahad mar kale.
Waxaad tarjumida badan jajabkii, waxaa laga yaabaa in engine google arko this jidka qaldan. Waxaan soo jeedinaynaa in isku dayaya ka computer / IP kala duwan. Waxa kale oo suuragal in la sameeyo geeddi-socodka dhakhso by sixiddiisa code isha.
Rob Daves sheegay
Just laba ah su'aalaha / khaladaadka ay suuragal tahay:
– mararka qaarkood url uusan si fiican u turjumi, waxaa ku jira hab lagu bedeli sida permalinks ka soo qaado qoraalka adduugteen (sida caadiga ah oo kaliya hal ama 2 Erayadan oo URL)? Waxaan kaliya fiiriyay kale, waxaana qabaa dhibaatada waa in Title ah aan la si fiican loo turjumay (maadaama ay tani waa waxa permalinks waa la gaaray) ma jirtaa hab si ku eegaan horyaalka sida beddelo permalinks ka dib dhajiyay waa xanuun a. Sidoo kale mararka qaarkood waxay u tarjumayaan jecla catagory ah.
– Ma jirtaa si kastaba in wax laga beddelo xeerka page isha (tusaale description Meta)
– ama waxaa bogagga shaqsi lagu kaydiyaa meel on folder server si ay halkaas beddelay karaa?
The mararka qaarkood waa marka url waxaa weli aan la turjumay, haddii aad awood u turjumo on post waa in si deg deg ah halkii ay dhici, turjumi oo dhan ayaa sidoo kale ka shaqeeya, Si kastaba ha ahaatee nasiib daro waxaa weli jid ay hagaajin turjumidda waa. noqon doonaa mustaqbalka qaar ka mid ah 😉
Intaa waxaa dheer fiican laga yaabaa in la abuuro a 301 jawaab markii url ma aha sax ah oo sax ah, si kastaba ha ahaatee tani waxay noqon lahaa jaan adag oo aan og nahay waxaan rabnaa in aan halkaas diiradda our energy.
Tilmaanta Meta waxaa sidoo kale lagu turjumay, sida ugu fiican ee qasac plugin waayo, hadda ka. Fikradda waa in a soo socda version mustaqbalka waxaan abuuri doonaa interface ah si ay u muujiyaan oo dhan jajabkii ka jirta bogga, gool ka mid ah.
Waxaa jira bogag ma kaydiyaa on server ee tafatirka, laakiin aad mar walba si toos ah u cusbooneysiin karaa miiska tarjumaadda, inkasta oo aanan anigu ku talin doonaa this.
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Ma laga yaabaa xaqiiqda ah in .html dhamaadka keeni karaa ereyga la soo dhaafay in aan turjumo? Sidoo kale ka dib markii turjumay permalinks ma beddeli (ka dib markii la isticmaalayo sida% tusaale% post ) Haddii aan dib u dhigay in ay qoraan iyo reposted doono shaqada this?
Sidoo kale widget ee Transposh – waxa uu noqon lahaa ay suuragal tahay in ay sida madax ah hogaanka si on everypage calamada muuqan sida madax yar socda guud ahaan dusha sare ee bogga ee navigation fudud?
Haddii pages ma pages ha baadhaan matoorada arko waxa lagu kaydiyaa miiska tarjumaadda iyo kuwan akhriyo sida pages?
su'aalo badan, halkan waa qaar ka mid ah jawaabaha:
1. haa tahay, .html waxay u badan tahay go'do doonaa
2. intay ka Dooriyaan sida ugu dhakhsaha badan turjumaad jiraa iyaga, waayo,, kaliya reposting waa caadi ahaan fiican oo ku filan, laakiin turjumo oo dhan malaha waa doorasho fiican si walba
3. Waxaan u qaadan waa suurto gal, aad leedahay waxaa laga yaabaa ah u bedelo xeerka yara
4. pages Tarjumaadda yihiin bogagga aad u badan sida pages WordPress waa pages, si qaylo dhaanta crawler ka badan bogagga kuwa badan tahay iyaga page sidii bog caadi ah loo beej doonaa
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Just sameeyey qaar ka mid ah jeegga dheeraad ah oo waxaa jira garoomo dhowr ah 404 qaladaad taas oo u eg:
(URL) /component / ikhtiyaarka,com_frontpage / Itemid,1/dheer,it /
Waxaan kuugu dari lahayn ee 404 khaladaadka plugin waxaanan rajaynayaa in tani u shaqaysaa.
Waxaan sidoo kale helitaanka garoomo dhowr ah sharaxaada Meta nuqul oo tags horyaalka – waxaa ku jira si kastaba wareega this?
Arrinta Meta la shaqeeyay on, waxa kale oo uu turjumay haddii ay kulan weedha ah ee hadda jira bogga, version a mustaqbalka qabto doonaa this fiican.
Ma u hesho 404 khaladaad, kuwa waa in aysan dhicin, laakiin haddii aad rabto in aad ii runtii iyaga arka oo aan u baahan si ay u arkaan url oo abuuri links xun sida
plugin la isugeeyey waxay yeeleen trick sida 404 ayaa dhan dhidbidda bogga go'an. Aad eegno http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
oo tusaale u ah page a abuuray oo hadda lagu wareejiyey.
Sida Meta aan isticmaalo marka hore ku 160 erayada post ee hoostana ka – Anigu waxaan la isticmaalayo oo dhan mid ka mid SEO taas oo ah meesha ay dhibaatada waxaa laga yaabaa in. Waxaa mararka qaarkood tarjumay qaar ka mid ah, laakiin sida caadiga ah ma dhan waxaa ka mid ah.
Weeraryahanka eeg in update… thanks mar.
Hi waan jeclahay aad plugin, laakiin waxaan dhibaato ka qabo mid ka mid ah bogga: waxaa turjumay suuqa beeralay ee la ‘ saxiixa on url ah, sidaa darteed waxaan qabaa in ay diidayso xaq u shaqeeya…
Waxaad arki kartaa qaladka gujinaya calanka USA (geeska midig ee sare) on this link:
fikradaha kasta sida aan this hagaajin kari waayay? Waxaa laga yaabaa in aad taabato wax on database ama Transposh kayd ah?
Sidaas darteed haddii qof yimaado guud ahaan aan dhibaato, waa in aad samayn post imtixaan la weedha gudaha naqilkii, waxay leeyihiin waxaa turjumay iyo saxo turjumidda in ay qaataan hamso ka soo baxay waxaa ka mid ah, hagaaji doonaa URL ee boostada turjumay asalka. Ma ahan kaamil ah inkastoo sababtoo ah weedha ah waxay noqon doonaan khalad (tagay Suuqa Beeralayda halkii Market Farmer ayaa) laakiin waa arin deg deg ah.
Thanks wax badan u fikradda waydiiyaa.